တစ်နိုင်ငံလုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ ပထမ ရရှိသော မသဇင်ဝင်းကို ငွေကျပ်သိန်း(၅၀) ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့် ….
တစ်နိုင်ငံလုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ ပထမ ရရှိသော မသဇင်ဝင်းကို ငွေကျပ်သိန်း(၅၀) ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့် ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ တစ်နိူင်ငံလုံး ပထမရရှိသော မသဇင်ဝင်းကို ပုသိမ်မြို့မြေနုလမ်း မှဒေါက်တာ မောင်မောင်သန်းနှင့်ဒေါက်တာအေးအေးမြင့်တို့ ၏ နိုင်ငံခြားမှသူငယ်ချင်းက သမီးလေးအတွက် ကျပ်ငွေသိန်းငါးဆယ်ကျပ်ကိုဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပါသည် ။ အားလုံးဝမ်းသာနိုင်ကြစေရန် မျှဝေပါသည် […]
မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ၂၃ ရက်နေ့အထိကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ sun mon tue thu fri san unicode မိတျဆှတေို့ ခြိနျဆနိုငျရနျ တဈပတျစာ မနောမယဟောစာတမျး […]
ယာဉ်မတော်တဆမှုမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာဝန်လေး(၃)ဦးအကြောင်းကို “အမည် မဖော်တတ်သောဝေဒနာ” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လာသူ…
အမည် မဖော်တတ်သောဝေဒနာ … ဒီနေ့ ဖျာပုံဆေးရုံက ဆရာဝန် ၃ယောက် ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့်သေတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲ တင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ခံစားမိရတယ် ။ဆရာဝန်လောကဆိုတော့ ကိုယ့်ချင်းထဲက မပါပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းခဲ့ပေမယ့် မပြည့်ခဲ့ပါဘူး ။သေတဲ့ ၃ယောက်မှာ ၂ယောက်က ဆေး ၂ က ၊ […]
ကင်ဆာသတ်နိုင်တဲ့ သင်္ဘောရွက်ပါရောဂါ အတော်များများအတွက် အသုံးဝင်ပုံများကို (ထပ်မံ ဖြည့်စွက် တင်ပြပေးထားပါတယ်) မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တချိုသော မိသားစုဝင်တွေဟာ ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ခပ်စိတ်စိတ် ကြားလာရတာများတော့ကင်ဆာလူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တဲ့ တင်ပြီးသားပို့စ်ကို ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီထဲမှာ သင်္ဘောရွက်ကို ကိုယ်တိုင် အခြောက်လှန်းပြိး ကြိပ်ထားပုံကိုလည်း […]
အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတွေတွေးထင်တတ်ကြတဲ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံး အမှားများ…
မိန်းကလေးအများစုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကြားဖူးနားဝစကားတွေကြောင့်ဖြစ်စေ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားစွာယူဆပြီး အမှန်ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့်အရာတွေက မိန်းကလေးတွေ အထင်မှားတတ်ကြတဲ့၊ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အမှားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာလေးတွေကို သတိနဲ့ဆင်ခြင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်နော်……. (၁) သူကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်နိုင်တော့ဘူး။ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ […]
ဒီလိုခံစားမှုတွေ ကြုံနေရပြီဆိုရင် ရှေ့လျှောက်ကံကောင်းခြင်းတွေ သင့်ဆီရောက်လာတော့မှာပါ…
ဘ၀မှာ ကောင်းတာချည်းပဲကြုံနေရတာမဟုတ်သလို၊ ဆိုးတာချည်းပဲလည်း အမြဲကြုံမနေရပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ကံဆိုးတာတွေအဆုံးသတ်ပြီး ကံကောင်းတာတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို သိချင်နေမယ် ထင်ပါတယ်။ ကဲ … ဒီအချက်တွေ ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင် သင့်ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ မကြာခင် သေချာပေါက် ရောက်လာတော့မယ်လို့ သိထားလိုက်ပါတော့။ (၁) လက်ရှိအချိန်မှာ အာရုံစိုက်လို့ရနေပြီ ဆိုရင် အတိတ်တွေ၊ […]
“ပျက်ပြီးသား ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်း ပြန်ဖြစ်နေသူများသည် စိတ်မနှံ့နိုင်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိ”…
ပျက်ပြီးသား ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်း ပြန်ဖြစ်နေသူများသည် စိတ်မနှံ့နိုင်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိ ‘ တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ ချစ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ပြတ်သွားတဲ့ အခါမှာ သူငယ်ချင်းလို ပြန်နေနိုင်လား ’ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ စထားတဲ့ ဒီလေ့လာမှုကတော့ မေးခွန်း သတ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ . . […]
စိုင်းစိုင်းရဲ့ Birthday Show လက်ပတ်ကြောင့် လက်မှာ အရေကြည်ဖူးတွေပေါက်ပြီး အနာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေး…
ပရိသတ်ကြီးရေ စိုင်းစိုင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး အဆိုတော်တစ်ဦးလို့ ပြောရလောက်အောင် နာမည်ကြီးအောင်မြင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းက Hip Hop ,Pop , Rap ဂီတအမျိုးအစားတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေဖန်တီးကာ စိတ်တိုင်းကျရေးစပ်သီဆိုလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကဗျာဆန်ဆန် စာသားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့အောင် ဖန်တီးရေးသားလေ့ရှိသလို […]
မိန်းက​လေး​တွေဖက်​ကြည့်ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်က 1-သင့်​ကို Facebook password ပေးထားနိုင်ရင် 2-သူ့ဖုန်းကို ကြိုက်သလိုစစ်ခွင့်ပေးရင် 3-လမ်းကူးတဲ့အခါ သင့်လက်ကို ကိုင်ပြီးကူးရင် 4-ဖုန်းပြောတိုင်း သူအရင်မချရင် 5-ရန်ဖြစ်တိုင်း မအော်ဂေါက်ရင်/နင် နဲ့ငါ နဲ့စမပြောရင် 6-သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရင် 7-သင် Shopping ထွက်တိုင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိုက်ပေးနိုင်ရင် 8-သူ့ဖုန်း […]